Mapurasitiki mamodheru gallery - apera - Modelarski Świat
Category: Garari yemabasa akapedzwa
MiniArt BANTAM 40 BRC ine vashandi, 1/35 - gallery uye zvivakwa zvekuvaka
Iyo modhi yakatove yakapihwa pachiitiko chaFr. wash'kumeso kupenda, nguva yekupedzisira mhedzisiro. Kune iyo modhi, ini ndakagadzira yakapusa kumira mune yakajairwa mamiriro ekunze zvichienderana nesyrodur. Iyo modhi irudzi rwe diki, asi izere nezviri mukati. Iyo ine akawanda seanosvika mashanu manhamba, nekuda kweayo iyo isingatarise sehurombo. Mutengo weiyo set yakatenderedza PLN 5-75, iyo ingaite senge yakawanda senge ...
"MODELING WORLD" CHAMPIONSHIPI MARCH 2018 - basa rinokunda naMarcin Muszkiet!
Muenzaniso: Waffentrager auf E-100, 1/72 Munyori: Marcin Muszkieta WINNER WEMODZIDZO YENYIKA YEMUSANGANO MARCH 2018 muchikamu: iyo inonakidza kwazvo mushumo wemifananidzo.
Volkswagen T1 Samba Bhazi - 1/24 Revell
Yangu yekare, yakachengetedzwa modhi, iyo ini yandinotarisira nemanzwiro makuru. Ini ndakadzidza mashandiro nemask, mafirita nemafuta, uye mashandisiro ebhurasho remhepo. Yakatengwa isina kukwana pafandesi yepamhepo, iyo isina kundinetsa zvakanyanya, sezvo yaifanirwa kunge iri tambo kubva pakutanga chaipo. Sezvo zvinokodzera Revell, kupeta kwakasiya zvakawanda zvekuda uye pakanga paine zvikanganiso zvishoma mubhuku - ...
Garari: "Mutengo weHondo" - Mugwagwa w / yakaparadzwa imba - 1/35 MiniArt
Garari: US M41 Walker Bulldog - 1/35 Tamiya
Iyi modhi yaive imwe yemhando dzangu dzekutanga dzakashongedzwa, kana isiri yekutanga. Kunyangwe izvi, yaive yega kubva panguva iyoyo - yaive yakavharirwa mudare (izvo zvandinokurudzira nemoyo wese). Yakachipa Tamiya yakatarwa (parizvino yakatenderedza PLN 50), inofungidzirwa zvakapetwa uye isina kana zvakakomba zvakakanganisika, zvine chekuita nemutengo waunofanira kuribhadhara. Hukuru…